Raila Odinga oo ugu baaqay dowladda Kenya inay hakiso qorshaha dib u celinta qaxootiga – STAR FM SOMALIA
Raila Odinga oo ugu baaqay dowladda Kenya inay hakiso qorshaha dib u celinta qaxootiga
Hogaamiyaha Isbaheysiga mucaaradka Cord ee Kenya Raila Odinga ayaa ugu baaqay dowladda inay dib u dhigto go’aanka ay ku dooneyso inay ku xirto xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
Raila Odinga ayaa sheegay in ugu horeyn looga baahan yahay dowladda Kenya inay sugto ammaanka qaxootiga, ka hor inta aan dalkooda dib loogu celin.
“Haddii Ciidamadeena lagu dilayo Soomaaliya, maxaa dadka rayidka ee ku sugan Dhadhaab loo celinayaa, ma waxaad u celineysaan inay dhintaan”ayuu yiri Odinga oo meel fagaare ah Sabtidii kula hadlayay dadweynaha reer Gaarisa
Waxaa uu ka codsaday dowladda Kenya inay hakiso dib u celinta qaxootiga, isla markaana inta aan la celin qaxootigan loo sameeyo guryo la dejiyo.
“Dadkaan waxay ka soo carareen dagaalo ka socday dalkooda, idinkana waxaa dooneysaan inaad dib u celisaan.
Xerada Qaxootiga Dadhaab ayaa ah xerada ugu weyn ee Caalamka, halkaasoo ay ku nool yihiin illaa nus milyan qaxooti u badan Soomaali
Qaxootiga ugu badan ayaa ka soo baxsaday dagaaladii sokeeye ee ka qarxay Soomaaliya sanadkii 1991, markii xukunka laga tuuray Madaxweyne Mohamed Siad Barre.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in bisha November ay bilaabeyso dib u celinta qaxootiga ku sugan xerada Dhadhaab.
Askartii AMISOM ee Muqdisho lagu xiray iyo alaabtii ay Iibinayeen oo lasoo bandhigay (Daawo Sawirada)